Rakotra fonosana taratasy fonosana horonam-peo China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Tape taratasy vita sokitra,Famonosana taratasy,Tape Mihetsika ny rano
Home > Products > Taling Sealing > Kraft Tape > Rakotra fonosana taratasy fonosana horonam-peo
Ny kaody vita amin'ny boribory dia miteraka fijery avo lenta sy tombo-kase avo lenta miaraka amin'ireo karazana baoritra feno feno na fenoina. Indraindray, ny olona dia mampiasa izany mba hamehezana ny hamandoana sy ny vovoka ary ny loto. Azo atao koa ny manamboatra fonosana taratasy handrakofana ireo labels taloha sy marika hanamaivana ny orinasam-pandefasana entana. Ny fantson-drano mihetsika dia hivezivezy amin'ny baoritra mandritra ny fandefasana sy ny fikarakarana.
Kraft Tape dia mila taratasy kraft mahery vaika ho an'ny fitaovana fototra, mifangaro amin'ny Glues adhesive starch.
Misy karazana adhesive telo izay safidinao.
Izahay koa dia manana rakotra lamba kraft mando sy horonam-bokatra tsy misy rano.Ny fanakorontanana taratasy vita amin'ny Kraft, fika kitapom-bolan'ny Kraft efa vita, Tape-taratasy vita amin'ny Kraft vita pirinty.
Azo atao pirinty ny mariky ny mpanjifa na inona na inona fangatahan'ny mpanjifa.
Fantatrao ve izany?
Tape taratasy vita sokitra Famonosana taratasy Tape Mihetsika ny rano Voaroaka vita sokitra Tape taratasy fanjairana Fandefasana taratasy mitatitra Tape taratasy Tape boaty vita pirinty